Nahatratra 42 ireo tranga vaovao, omaly: samy diabetika ireo olona telo matin’ny Coronavirus | NewsMada
Namoy ny ainy noho valanaretina Covid-19 ireo olona telo, notsaboina tao amin’ny CHU Morafeno Toamasina. Voalaza fa efa samy taizan’aretina avokoa izy ireo. Tafakatra dimy izany izao ireo matin’ny Coronavirus eto amintsika.
« Efa taizan’aretina diabeta avokoa izy telo maty ireto », hoy ny mpitondra tenin’ny CCO, ny Pr Vololontiana Hanta, omaly, nitatitra izany. Anisan’ny nahatafiditra azy ireo tao anatin’ny tranga nila famonjena mafy noho ny fahasemporana be nahazo azy ireo vokatry ny Covid-19 taminy izany. Vehivavy 52 taona sy lehilahy 73 sy 43 taona ireto lavon’ny Coronavirus ireto. Anisan’izany ary nalevina avy hatrany, omaly, Ranjatomanana Liva, mpitantambola tamin’ny orinasan-tserasera eto Toamasina. Antony nidirany hopitaly ny diabeta sy ny aretim-bavony mpahazo azy ka izao niova ho Coronavirus izao ary nitarika ny fahafatesany.
Etsy andaniny, nisy olona roa hafa koa tsy afa-bela fa lavon’ity valanaretina ity. Tsy tratran’ny mpanao gazety intsony ny famoahana ny razana iray hafa, nalevina avy hatrany, omaly.
Ankoatra izany, misy olona miabo, nifindran’ny Coronavirus, saingy tsy misy
soratr’aretina miisa 16 nampidirina etsy amin’ny hopitaly vaovao kianja mitafon’ny CRJS, hatramin’ny fotoana nanoratanay.
Tsy latsaky ny 40 isan’andro ireo tratran’ny Coronavirus
Manoloana ireo rehetra ireo, tsy latsaky ny 40 hatrany ny isan’ireo nifindran’ny valanaretina, tato anatin’ny herinandro vitsy. Miisa 42 ny tranga vaovao, afakomaly, araka ny tatitry ny CCO, omaly. Ny voka-pitiliana navoakan’ny IPM sy ny laboratoara any Toamasina, nahitana tranga miisa 24. Ho an’ny CICM eny Ankatso kosa, nahitana tranga vaovao miisa 18.
Miisa 10 249 izany izao ny fitiliana vita hatramin’ny 27 mey teo. Tafakatra 698 ireo tratran’ny Coronavirus hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Miisa 589 ireo mbola manaraka fitsaboana. Nisy ny sitrana miisa efatra ka 164 izany izao ireo nahafeno ny fepetra amin’ny fhasitranana. Sivy kosa ireo ahina ny toe-pahasalamany amin’izao fotoana izao ary any Toamasina avokoa izy ireo. Miisa dimy ireo maty ary any amin’ny faritra Atsinanana any ihany koa izy ireo. « Tena anaty ady mafana tanteraka isika nefa aoka ho tony… Azo atao ny mandeha miasa tsy maintsy mivoaka nefa araho sy hajao avokoa ny fepetra rehetra », hoy ny mpitondra tenin’ny CCO, i Vololontiana Hanta, omaly.